ဘ၀မှာ သစ်ပင်တစ်ပင် စိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အပင်ကို စိုက်မှာလဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘ၀မှာ သစ်ပင်တစ်ပင် စိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အပင်ကို စိုက်မှာလဲ…
ဘ၀မှာ သစ်ပင်တစ်ပင် စိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အပင်ကို စိုက်မှာလဲ…
Posted by we R one on Jun 25, 2011 in Creative Writing, Environment | 43 comments
ကျွန်မ ဖတ်ဖူးတဲ့ ဆရာ မ ဂျူး ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်တစ်အုပ် အကြောင်းလေး ပြောချင်လို့ပါ။ စာအုပ် တစ်အုပ်လုံး ဆိုတာ ထက် စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရော မေးခွန်းလေး တစ်ခု ပေါ့။ စာအုပ် နာမည် က “ စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး ” တဲ့ ။ ရွာသူ/ ရွာသားတွေ ဖတ်ဖူး ကြတဲ့ သူရှိသလို မဖတ်ဖူးတဲ့ သူလည်း ရှိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းထဲ မှာ ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံမရှိဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ သူဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောက် ကြိုးစားတယ် ၊ ဘ၀ ကို အရှုံးအပေးဘူး။ သူ့ ရည်းစားကောင်းက Rapper တစ်ယောက်။ သူဌေးသားပေါ့။ သူ့ သူငယ်ချင်းကောင် လေးတစ်ယောက်လည်း ရှိသေတယ်။
သူ့တို့အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးဖြေတဲ့ အခါ မေးတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ကောင်လေး ကိုမေးတာလား ၊ ကောင်မလေး ကို မေးတာလားတော့ သေချာ မမှတ်မိတော့ ဘူး။ အဲဒီ မေးခွန်ကို ကြိုက်လို့ မှတ်ထားတာ။ အခု အဲဒီ မေးခွန်းကို ရွာသူရွာသား တွေ ကို မေးချင်တယ်။ ဖြေတဲ့ အခါတော့ အကြောင်းပြချက်လေး တော့ ရေးပေးစေချင်တယ်။
မေးခွန်းက ” တကယ်လို့ ဘ၀မှာ သစ်ပင်တစ်ပင် စိုက်ခွင့်ရမယ် ဆိုရင် ဘယ်လို အပင်မျိုးကို စိုက်မှာလဲ ‘ ။
ကျွန်မ ကတော့ ဗန်ဒါပင် ကို စိုက်မိမယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နာဂစ်နောက် ပိုင်း အရမ်းပူလာတဲ့ ရန်ကုန် အတွက် အပင်ကြီးထွားတာ မြန်ပြီး အရိပ်ရတဲ့ ဗန်ဒါပင်က ပိုသင့်တော်မယ် ထင်လို့ပါ။
မလေးရှားပိတောက်ကို လမ်းဘေးတွေမှာ ကြီးမြန်လို့ အရိပ်လည်းရ၊ ထင်းလည်းရအနေနဲ့ စိုက်ကြတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀အတွက်တော့ စိုက်ခွင့်ရှိရင် ကျွန်းပင်စိုက်ချင်ပါတယ်။ စိုက်ရတာချင်းတူတူ၊ တစ်ပင်ချင်းတူတူ တန်ဖိုးချင်းမတူလို့ ကိုယ့် တစ်သက်မှာ မမှီပေမယ့် နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် အကျိုးများမှာမို့ပါ။
အင်မတန် သန်စွမ်းပြီး တနှစ်လုံး သီးပွင့်တဲ့
မွှေးလဲမွှေး လှလဲလှ အရိပ်လဲရ ။
မိုးခေါင်တဲ့ နေရာတွေမှာ မန်ကျည်းပင် စိုက်မယ်။
ဒဏ်ခံနိုင်တယ် အသီးလည်းရတယ် အရွက်နုလည်း သုတ်စားကောင်းတယ်။ အကိုင်းလည်း မာတယ်။
ရော်ဘာပင်ပဲ စိုက်မယ် …
အန်တီ ဝေ စိုက်တဲ့ အပင် နည်းနည်း ရင့်ရင် ရာဘာ လာ ထုတ်မယ်နော်.. ဟဲဟဲ..
မှော်ဘီမှာ ဘုန်းကြီး ကျောင်း တခုမှာ အရင်က ရာဘာ စိုက်ခင်းထင်ပါတယ် ကျောင်းအနောက်ဘက်မှာ ရာဘာပင်တွေ အားကြီးပဲ.. ရွာသားတွေ တိတ်တိတ် ၀င်ပြီး ရာဘာ အစေး လာထုတ်ကြတာ တွေ့တယ်။
တနေ့ တနေ့ ဘာမှ ရတာလည်း မတွေ့ဘူး။ ဟုတ်တာတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။
အပင်က ရာဘာစေး ထုတ်ထားတော့ မလှတော့ဘူး အခြစ်ရာတွေ ဖြစ်နေလို့။
ရော်ဘာကို ရွှေဖြူလို့တောင် တင်စားခေါ်ကြတယ်လေ … တစ်ပင်လုံး အသုံးဝင်တယ် … နှစ်ရှည်စီးပွားရေးလဲဖြစ်တယ် … နောက်ဆုံးရော်ဘာမရတော့ရင်တော့ အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ သုံးနိုင်သေးတယ် …
စိုက်မယ်. အပင်နဲ. စိတ်ကူး ပိုင်ရှင်တွေကို ခုလို တွဲပေးလိုက်တယ် မှားရင် မုန်.ကျွေး မှန်ရင်လည်း ကျွေး
၀ီရုန်း—- ဖြစ်ပျက်သွားတဲ.ကိစ္စ အပေါ်သင်ခန်းစာယူပြီး နောက်ကိစ္စ က်ို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်တတ်သူ
မမ —- မိမိရဲ.ကြီးမားတဲ.ရည်ရွယ်ချက်၊ကောင်းမြတ်တဲ.လုပ်ရပ်က်ို နောက်လူတွေ မမေ့စေချင်သူ လက်ဆင်.ကမ်းလိုသူ
အံတီမိုး—- ဒီနေ.ဘာစားရရင် ကောင်းမလဲဟုအမြဲ စဉ်းစားနေတတ်သူ၊ အစားကို နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ်လုပ်စားတတ်သူ သူများကိုလည်းကျွေးတတ်သူ
ကိုပေါက်—ငြိမ်း အေးသက်သာ မှုနှင်. အလှအပ တရားတို. ကို သာခံစားနေလိုသူ (မြန်ကောင်းသက်သာလှပအေးဆေး)
ဆူး—- တာရှည် တည်တံ့မှုကိုဦးစားပေးသူ တစ်ချိန်တည်းမှာ အကျိုးနှစ်ခုရှိအောင်ဖန်တတ်သူ
ဖော်အဲဗား—-စိတ်သဘောထား ကောင်းပြီး သူတစ်ဘက်သား ကို ပေးကမ်းချင်တတ်သူ
ဝေေ၀— ရေရှည် ကိုကြည့်၍ စီမံကိန်းဆွဲတတ်သူ အသေးအမွှားပစ္စည်းမှအစ အကောင်းသာကိုင်ချင်သူ
ကျွန်တော်ကတော. ကန့်ကော်ပင်စိုက်မယ် …………….. ဘာလို့လဲဆိုတော…..
ငယ်ငယ်တုန်း က စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ မမ က ကန်.ကော်ဝတ်ဆံ ကို သနပ်ခါးနဲ့ရောလိမ်း ထားတဲ့ အနံ့ ကို ခုထိစွဲ လမ်းနေမိလို.။
ကျွန်းပင်ပေါ့ကွယ်။ တပင်ထဲတောင်ဟုတ်ဖူး။ အုပ်လိုက်စိုက်ပြီး အိပ်စ်စပို့ရောင်းစားမယ်။
ကြောင်ကြီး—သူများထက် ပိုတော် ပိုတတ် ပိုသိချင်သူ သိအောင်လည်းကြိုးစားသူ (လူလည်လုပ်ချင်သူ)
ကျွှန်း စိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အသက်ရှည်မှ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်းက ၁၀နှစ်တောင် လုံးပတ်က ခပ်သေးသေး.. နှစ် ၂၀လောက်မှ နည်းနည်း တုတ်သလို ဖြစ်လာတာ.. ၃၀ လောက်မှ နည်းနည်း မျက်စိကျချင်စရာ ၄၀ ၅၀ လောက် ဆိုရင်တော့ ထုတ်လို့ ရပြီ။ ဒါတောင် သိပ်အကြီးကြီး မဟုတ်သေးဘူး။
အဘဆွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ကတော့ အံမခန်းပဲ။ မုန့်ကျွေးချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။ ဦးဖက်လို ပြောရမယ်ဆိုရင်- အဘဆွေ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် အိမ်လိပ်စာပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်လည်း ဘယ်နိုင်ငံလည်း ပြောပေးပါ။ (ဧည့်သည်လာလုပ်မလို့။)
တော်လိုက်တဲ့ အဘဆွေ …
မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး ဗေဒင်ဟောစားဖို့ကောင်းတယ် …
လူမမြင်ပဲနဲ့တောင် ဒီလောက်မှန်အောင်ဟောနိုင်တယ်ဆိုတော့ …
မတူညီသော အတွေး လေး ဖြင့် ဒီလို လေး ကွန်မင့်ပေးမယ် ဗျာ ။အခု လောလောဆယ် ဘ၀ မှာ သစ်ပင် အများကြီး စိုက်ခွင့် ရှိတယ် မလား ။ ဒီတော့ စိုက်ရလွယ်ကူပြီး အပင်အကြီးမြန် အရိပ်မြန်မြန်ပေး နိုင်တဲ့ သစ်ပင်ကြီးမျိုးတွေ ကို အရင်စိုက်မယ် ဗျာ ။ ငွေယားလေး ပေါ လာရင်တော့ နောင်ရေး အတွက် သရက်ခြံ တို့ ကျွန်းခြံ တို့ သစ်မွှေးခြံ တို့ စိုက်မယ် ဗျာ ။ လောလောဆယ် တော့ ရေးသာ ရေး နေတာ ဘာပင်မှ မစိုက်ရသေးတာ အမှန်ပဲ ဗျို့ ။ နောက်နေ့ တွေ တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ပင်တော့ စိုက်ဖြစ်အောင် စိုက်မယ် လို့ဒီစာ အဆုံးမှာ ကတိပြု တယ် ဗျာ ။
တို့ကတော့ တမာပင်ပဲ စိုက်မယ်နော် …. အိမ်ရှေ့တမာ အိမ်နောက် ခံတက် စီးပွားတက်တဲ့… ပြီးတော့ တမာပင်ကို ဖြတ်ပြီးတိုက်လာတဲ့ လေကိုရှူရင် အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းစေတယ်တဲ့…
အဘနီ—စီးပွားရေးနှင်.ကျမ္မာရေး ဆတူဦးစားပေးသူ ( အဆုတ်သန်.အောင်ကြိုးစားရင်း ချဉ်ဖတ် တည်ရောင်းရန် ကြံစည်သူ)
အဘနီ က အဆုတ် သန့်ချင်ဆို ဆေးပေါလိပ် အမြဲ လက်ကြားမှာ ရှိတတ်တဲ့ လူမျိုး ဖြစ်နေလို့ပါကွယ်။ မယုံရင် မေးကြည့် အဘနီ ပြောဖူးတယ် ဆေးပေါ့လိပ်နဲ့ နေ၀န်းနီ ဆိုတာ သူရဲ့ ထရိတ်မတ် လို ဖြစ်နေပြီတဲ့ ပြောဘူးတယ်။
စာကြည့်စားပွဲမှာတင်ထားလို့ရတဲ့ အစိမ်းရောင် အပင်သေးသေးလေးတွေပဲစိုက်ချင်တယ်။
စာကြည့်လို့မျက်စိညောင်းရင် အစိမ်းရောင် အပင်လေးကိုကြည့်မယ်။
တကယ်လို့ အပွင့်ပွင့်တဲ့အပင်ဖြစ်ရင်လည်း အဖူးစဖူးတဲ့နေ့ကနေ အပွင့်ကြီးဖြစ်တဲ့နေ့အထိ ၁နေ့ ၁ခါလောက် ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ မှာ သစ်ပင် တပင်သာ စိုက်ရမယ် ဆိုရင် သရက်ပင်ပဲစိုက်ချင်ပါတယ်…..
အရိပ်လဲကောင်း…စီးပွားလဲ ဖြစ်.. နှစ်ရှည်လဲခံ …စွမ်းအင်လဲ၇…တိုင်းပြည်လဲ`၀’ …..:)
တစ်ပင်ထဲအတွက်တော့ တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ ယူဆမိတယ်.. အန်တီမိုးကိုလဲ ထောက်ခံလိုက်တယ်..
အရွက်နု ..အသီကင်း တို့စားလို့ရတယ် သရက်သီးသနပ် ဆားရေစိမ် လုပ်စားလို့ရတယ် အမှည့် စားလို့ရတယ်..စိန်တလုံးသီးဆို နိင်ငွခြားဝင်ငွေပါ ရတယ် ..အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်လို့ အရိပ်ကောင်းပြီးအထူးတလည် ဂရုစိုက်စရာမလိုတဲ့အပင်..အကြီးမြန်သော နှစ်ရှည်ခံအပင်……သရက်သီးမရတော့ရင်လဲ အိမ်ဆောက်လို့ ရပါသည်..
တပင်ထဲ ဆိုရင်တော့ antimoe ပြောသလို သရက်ပင်စိုက်မယ်။ တခါက စိန်တလုံး သရက်ပင်၁ပင် စိုက်ဘူးတယ်။ တကယ်ထူးဆန်းတယ်။ပညတ်သွားရာဓါက်သက်ပါလို့လားမသိဘူး။ တနှစ်တလုံး မှန်မှန်သီးတယ်။ :} :]
စိတ်မပူနဲ့ သစ်ပင် သက်တမ်း ၅နှစ်ကျော်ရင် အလုံး များများ သီးလာလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ် စိန်တလုံး တွေ အရမ်းကို ပိုးကျတယ်။ အိမ်က အသီးတောင် ပိုးနဲ့ လု စားနေရတယ်။
သရက်သီး ပေါချိန်တုန်းကဆိုရင် တနေ့ တလုံး မှန်မှန် စားရတယ်။ အခုတော့ သရက်သီး တုံးသွားပြီ။ အိမ်က အပင်ကတော့.. ၁နှစ်ကို ၃ခါ သီးတယ်။ ကိုင်းကူး ကိုင်းဆက် ဆိုတော့ အပင်က အားနည်းလို့ အမြင့်ကြီး မတက်ပဲ ပုပုလေးနဲ့ သီးတယ်။
တော်သေးလို့ ရင်ကွဲ သီး မစိုက်မိတာ…တော်ကြာဆူးအိမ်က အပင်လို တနှစ်သုံးခါသီးရင် တနှစ်သုံးခါ ရင်ကွဲနေရမယ်….wo(mango) ပေါ့နော်……….
မန်ကျည်းပင်စိုက်မယ်… ချဉ်ငံစပ်ကြိုက်တဲ့ မြန်မာတွေက ဘာချက်ချက် အချဉ်လေးပါမှ ထမင်းစားတယ်…
မန်ကျည်းရွက်နုကိုလည်း စားလို့ရတယ်။ မန်ကျည်းသီးနုနုလေးတွေကို ကြော်စားဦးမလား… ရင့်ရင်လည်း ဟင်းထဲထည့်ချက်လို့ရတယ်။ အဘွားတို့ဆို တို့စရာမရှိရင် မန်ကျည်းသီးကို တို့စားတယ်။ ၀မ်းချုပ်နေရင်လည်း သကြားလေးနဲ့ မန်ကျည်းဖျော်ရည် လုပ်သောက်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီး မန်ကျည်းသားစဉ်းနှီတုန်းဆို ဈေးကောင်းရတယ်…
သက်တမ်းလည်း ရှည်တယ်၊ အရိပ်လည်းရတယ်….
အမြဲ မှန်မှန် အရွက်ခူးပေးနေရင်
အဲဒီ စာအုပ် က အရမ်းကောင်းတယ် ။ ယုယ ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို အင်တာဗျုးတဲ့ အလုပ်ရှင်က မေးတာ
ဘာပင်စိုက်မလဲ လို့။ ယုယ ကလည်း အရိပ်ရ ပင် ပဲ စိုက်မယ် လို့ဖြေတယ် ။ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းထားတာက သိပ်ကောင်းတယ်။ စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်တွေး
ပြီးမှ ပို ကောင်းတာ။ ပြီးတော့…. သူငယ်ချင်းတို့ကိုပြောချင်တာက ဘာပင်စိုက်မလဲ ဆိုတာထက်..ဘယ်တော့ စိုက်မလဲ ဆိုတာကို မေးကြဖြေကြစေချင်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခု ပဲ..စိုက်နေတယ် ။အိမ်မှာ ဆို သစ်တော ကလေးဖြစ်တော့မယ် ။ ဘာပင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိုက်လိုက်မှာပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးကျိုးတွေ ပေးမယ့် အပင်မျိုးက လွဲ ရင် ဘာပင် ဖြစ်ဖြစ် စိုက်မယ် ။
နော်နေ့ ဆိုတာမသေချာသေးဘူး။ ဘ၀မှာ သစ်ပင်တွေ စိုက်ခဲ့ ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အသိကလေးနဲ့ သေသွား၇င် တောင်မှ…..ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းလိုက်သလဲ..နော်။
weRone ရေ… ဆရာမဂျူးရဲ့ စာတွေကို ဝေငှပေးနေတာ ကျေးဇူးပါပဲကွာ…။
ဝမ်းနည်းစွာတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ် ( အယဂါးနောက်ဒါ အဆဲခံခြင်လို့ပါခည :D :D :D )
( ယနေ့လမ်းတွေကတော့ ဖွဲ့သည်းပုံက သိပ်ကျတာမဟုတ်ဘူး လမ်းဘေးစိုက်တော့လည်းအခုတ်ခံမှာဘဲ
လမ်းဘေးရဲ့အနောက်တွေကလည်း လမ်းဧရိယာတွေကို ခိုးထားတဲ့ သူများရဲ့အိမ်တွေ )
( ခင်ဗျားတို့ရဲ့မြို့ပေါ် ခြံတွေက ချဉ်ပေါင်ပင်တို့ ပင်စိမ်းပင်တို့လို အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်တည်ပင်တောင်စိုက်လို့မရဘူး)
ဘုံကထိန်ကြရင် ပဒေသာပင်လာစိုက်နော်။ ပဒေသာပင်က အဲဒီအချိန်မှ စိုက်လို့ရတာ။ အခြားအပင်တွေနဲ့မတူဘူး။
ဘကြီးပု နည်းနည်း ရေချိန်ကိုက်နေတယ် ထင်တယ်။ လိုရာကို “ဆွတ်” ခူးရမှာ မဟုတ်လား။
ဒါဖတ်ပြီး အဘဆွေကိုလဲ ကောက်ချက်ချမယ်
ငယ်ဘ၀လေးကို အတွေးနဲ့ လွမ်းနေသူလို့
လွှတ်တော်တဲ့ကိုပေါက် ကွက်တိဘဲ zodiac sign ကိုက Taurus ဆိုတော. စားမြုံ့ပြန်တတ်တဲ. သတ္တ၀ါ ထဲမှာပါလို့
ကျွန်မတို့အိမ်မှာ မန်ကျီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိခဲ့ဖူးတယ် … အရွက်ကြွေတွေက ခေါင်မိုးပေါ်ကျတော့ အချဉ်ဓါတ်က သွပ်ကို ပေါက်စေလို့ သွပ်ခဏခဏလဲရတယ် …
နာဂစ်လဲတိုက်လိုက်ရော အဲဒီအပင်ကြီးလဲ တုံးလုံးလဲသွားရတာပဲ … အနိစ္စ …
အားလုံးက စိုက်ချင်တာသာ ပြောကြပါတယ် .. မေးတဲ့လူက ဘယ်နေရာမှာ စိုက်မှာလဲ ဆိုတာ မဖော်ပြထားတော့ .. ဘာပင် စိုက်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ..
ဘယ်မြေမှာ စိုက်ရမယ် ဆိုတာ သိမှ ဘယ်အပင်ကို စိုက်ရမယ် ဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ .. (ဆရာမကြီး ၀င်လုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့ .. အတွေးထဲ ရုတ်တရက် ပေါ်တာ ၀င် ရှည်မိတာပါ)
ဗန်ဒါပင် ဆိုတာ ရေ သိပ် မလိုတော့ ကောင်းပါတယ် .. မလေးရှားပိတောက်က အကြီးမြန်တော့ ကောင်းတာတော့ ကောင်းပါတယ် .. အပွင့်တွေကြောင့် အမှိုက်ဖြစ်သလို .. အဲဒီ အပွင့်တွေကြောင့် ရင်ကျပ်ပန်းနာသမားတွေ အခက်တွေ့ရပါတယ် .. အုန်းပင်ကတော့ ဆားငံအရပ်မှာ ပိုဖြစ်ထွန်းတယ် .. (စိုက်ပျိုးရေးသမား တွေဆိုရင် ပို ရေးဖို့ ကောင်းမယ်ထင်တယ်)
ဆရာ ၀င်လုပ်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ..
ဘယ်မြေလဲ ဆိုတာကို အမေးရှင်က ရေးပေးစေချင်တယ်
အပင်မစိုက်နိုင်သေးဘူး …. စိုက်မယ့်အချိန်ရောက်ရင်
ဝါး ပင် ။ :D အသုံး ဝင်တယ် လှတယ် ။ ရုပ်ဝတ်ထု အရ လူတွေကိုအကြိုး ပြုတယ် ။ အနုပညာ အရလဲ စိတ်ကိုနှစ်သိမ့် မှုပေး တယ် ။ ဝါးပင် ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှု ၊ စိမ်းလန်းလတ်ဆတ် မှူ ၊ ခိုင်ခန့်မှု ၊ လွယ်လွယ်မပြိုလဲနိုင် တဲ့အရည်အချင်းတွေ ကိုလဲအတုယူနိုင်တယ် ။
အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ လေကြောင့်ပြိုလဲနိုင် ပေမဲ့ ဝါးပင်ကတော့ကြန့်ကြန့်ခံနိုင်ပါတယ် ။
တပင်မက တတောလုံး ပြည့်အောင် စိုက်ကြပါ။
ဘာအပင်ဆိုတာထက် စိုက်ဖြစ်ဘို့က အဓိကပါ။
ရတနာတန်းဝင် ကျွန်းပင် ဆိုရင် ကြိုက်..ကြိုက်…ကြိုက်…။
အပင်ဆိုရင် အရိပ်ပင်ရော စားပင်ရော ဘာပင်ေ၇ာ ညာပင်ရော အကုန်ုစိုက်ချင်တယ် ကြက်ဆူပင်ကလွဲလို့ ….
အမေး။ ။ ” တကယ်လို့ ဘ၀မှာ သစ်ပင်တစ်ပင် စိုက်ခွင့်ရမယ် ဆိုရင် ဘယ်လို အပင်မျိုးကို စိုက်မှာလဲ ‘ ။
အဖြေ။ ။ အရွက်က အများငြိမ်းအေးရာအရောင်အသွေး၊
တကယ့်အပင်ဆိုရင်တော့ ထန်းပင်စိုက်ချင်ပါတယ်။ အရွက်က အိမ်မိုးလို့၊အရေကသောက်လို့ရတယ်။ အမြစ်က စားလို့ရတယ်။
တစ်ပင်တည်းစိုက်ခွင့်ရရင်တော့ အုန်းပင်စိုက်ပါမယ်။ဇောက်ထိုးကြီးနေမယ်လို့တော့ မပြောပါနဲ့။
အသီးစား။မုန့်မျိုးစုံမှာ မပါမပြီး၊အရည်သောက် ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝလို့ ၀မ်းလျှောသူများအတွက်ဆေး။
အုန်းခွံက အမှတ်တရလက်ဆောင်ရင်ထိုးတွေ အရုပ်တွေလုပ်လို့ရ၊
အုန်းဆံကြိုးနဲ့ချည် ခြေသုတ်ဖုံမှာသုတ် ၊အုန်းဆံနဲ့ ဖွဲပြာရော အိုးတိုက်၊သဇင်ပန်းစိုက်လည်းပါ ပိန်းပန်းစိုက်လည်းပါ။၊
အုန်းလက်တံမျက်စည်းနဲ့ လှဲ ၊ပိုတဲ့အရွက် မီးမွှေး၊အုန်းပန်းကိုဘုရားတင်၊၊
အုန်းသားကိူစိပ်ပုတီးလုပ်၊ အုန်းတိုင်ကို အိမ်တိုင် တံတားတိုင်လုပ်၊အရှည်လိုက်ဆိုတံတားထိုးလို့လည်းရ၊
လေမုန်တိုင်းဒဏ်လည်းခံ၊ရေလောင်းရန်မလို၊ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်မြေသြဇာမလို ၊သြဂဲနစ်မစစ်မှာမပူရ၊
မျိုးကောင်းရင်စိုက်ပြီး ၃နှစ်ဆို စသီးပါပြီ။
ပြီးတော့.. ပိတောက်ဆိုတာ.. မြန်မာတွေနဲ့ ခွဲမရတဲ့ အပင်တစ်မျိုးမဟုတ်လား..
သင်္ကြန်မိုးနဲ့ အတူ.. ဖူးပွင့်လာမယ့် ပိတောက်ပန်းဆိုတာကလည်း.. သူ့အရာနဲ့ သူလေ..
နေရာ အတော်များများ မှာ ရှင်သန်နိုင်တယ်.. အစိမ်းရောင် အရွက်တွေကလည်း.. စိတ်ကို အေးမြစေလိမ့်မယ်..
အဲဒီ ပိတောက်ပန်းခက်လေးတွေကြောင့်ပဲ.. ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြသူတွေ ရှိမယ်..
ဆိုရရင်..သူက အချစ်သစ်ပင်လေးလည်း ဖြစ်တယ်… ဒါကြောင့် အချစ်သစ်ပင်လေး စိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရမယ်..
ဘာရယ် မဟုတ်ပေမယ့်… သူ့ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပစ်ထားခံရခဲ့ရင်တောင်… သင်္ကြန်ဝန်းကျင်မှာတော့ ဂရုစိုက်ခံရတဲ့ သစ်ပင်လေ..
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးတိုင်းမှာ အမှတ်တရ ရှိနေမယ့် အပင်လေး.. ပိတောက်ပင်လေး စိုက်ချင်တယ်..
ညောင်ပင်ပဲ စိုက်ချင်ပါတယ် ဗျို့ …
အထူးတလည်ပြုစု ပျိုးထောင်စရာမလိုပဲ ရှင်သန်တဲ့ အမျိုးမို့ပါ… ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အရိပ်ရသလို … သူများလည်း နားခိုလို့ရအောင်ရယ်… ။ အပင်ကကြီးလေ နတ်ကြီးလေပဲလို့ သတင်းလွှင့်လိုက်မယ်… ညောင်ပင်မှာ ရုက္ခစိုးရှိတယ်ဆိုပြီး ပူစော်ပသတဲ့ အခါ ၀ါးတီးဆွဲရကိန်းမို့ …. ညောင်ပင်ပဲ စိုက်ချင်ပါတယ် ဗျို့… ။